DEG DEG: Dagaal qaraar oo ka dhacay Afaafka hore Madaxtooyada Somalia & Xogo laga helayo | Garqaad News Agency
DEG DEG: Dagaal qaraar oo ka dhacay Afaafka hore Madaxtooyada Somalia & Xogo laga helayo
Iska horimaad ayaa ka dhacay meel aanan sidaasi kaga afaafka hore ee xarunta madaxtooyadda Villa Somaliya, gaar ahaan Koontaroolka wadada ka timaado Isgoyska Umbulutooriyadda Degmada Xamar jajab.
Arintaan ayaa ka dambeysay, kadib markii ciidan la sheegay inay ka tirsan yihiin kuwa Imaaraadka iyo ciidanka Koontaroolka Madaxtooyadda ay is afgaareen, iyadoo markii dambe arinta isku bedeshay gacan ka hadal.
Askari ka tirsanaa ciidamada Militariga ee ku sugan Koontaroolka Beerta Nabadda u dhaw ayaa ku geeriyooday, halka sidoo kale dhaawac uu soo gaaray askari la sheegay inuu ka tirsanaa ciidamada Imaaraadka ee saarnaa gaariga qooqanta ahaa.
Qof ka mid ah dadkii ka agdhawaa goobta ay wax ka dhaceen, ayaa Warbaahinta u sheegay, iyaga oo ciidamada murmaya mar kaliya inay xabad isku bilaabeen, kadibna lagu kala cararay nawaaxiga isgoyska Umbulutooriyadda.
“Saaxiibow anaga oo meesha mareyna ayaan aragnay markii hore ciidan gaari qooqan saaran iyo ciidanka Militariga oo is caaynaayo, kadibna caaydii waxa ay isku bedeshay xabado mar kaliya ayaan kala cararnay xabadihii markii ay bilowdeen, hadda ayaan maqleynaa askari inuu dhintay midna dhaawac uu yahay.” Ayuu yiri nin ku sugnaa isgoyska xilliga israsaaseynta dhaceysay.
Saraakiisha ciidanka Koofi Gaduud, ayaa durba ku soo cararay goobta ay wax ka dhaceen, iyadoo gaadiid dagaal fara badan laga soo bixiyay xarunta Madaxtooyadda, waxaana la xiray aagga wadooyinka u dhaw madaxtooyadda.
Maydka askariga ka tirsanaa ciidamada Koofi Gaduuda ee Madaxtooyadda ayaa laga qaaday goobtii uu ka dhacay iska hor imaadka, haddana xaaladda waxa ay tahay mid degan.